सर्वसाधारणका लागि कहिले खुल्लान रत्नमन्दिर ? | Rajmarga
फागुन ११, पोखरा । फेवातालको किनारैमा छ, पोखराको राजदरबार । जसलाई रत्नमन्दिर र हिमागृह भनेर चिनिन्छ । राजा महेन्द्रले श्रीमती रत्न राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा विसं। २०१३ सालमा बनाउन शुरू गरेका रत्नमन्दिर दरबार २०१५ सालमा बनाउन सकिएको थियो ।
मन्त्री लम्सालले तत्कालीन नेपाल ट्रष्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरसँगको सहमतिसँगै भ्रमण वर्षमै सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने जानकारी दिएको थियो । नेपाल ट्रष्टका तत्कालीन सचिव ठाकुरले पनि भ्रमण वर्ष २०२० लाई नै लक्षित गरेर रत्नमन्दिर खुलाउन तयारी गरिएको जानकारी थियो । “राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा आएसँगै सर्वसाधारणको हितका लागि यो सम्पत्तिको उपयोग गर्ने हो । यसैअनुरुप रत्नमन्दिर खुल्छ, सञ्चालनको अधिकार सबै नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतनै हुन्छ”, उहाँले गत पुस १० गते नै राससलाई भन्नुभएको थियो । जुन सामाचार ‘भ्रमण वर्षमा रत्नमन्दिर खुला गरिने’ शीर्षकमा छापिएको थियो । उहाँले स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफू मातहतमा हुनुपर्छ भने पनि अहिले दिन मिल्ने अवस्था नरहेको बताउँदै भन्नुभएको थियो ।
–जमुनावर्षा शर्मा (खोजी समाचार)
Previous post: सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गर्ने विश्वास छ : प्रचण्ड
Next post: कोरोना भाइरस खोपस् कोभिशील्ड ५५ वर्ष माथिका कस्ता मानिसले लगाउने ? यसप्रकार छ चिकित्सकको सुझाव